Pokémon GO ga-abịa na July na ngwa pụrụ iche wearable | Gam akporosis
Egwuregwu vidiyo na-abawanye ụba ebe anyị nwere ike ichu nta pokemon na agbata obi anyị, malitere beta mechiri emechi n'ọnwa gara aga. Egwuregwu vidio nke Nintendo nọ na-arụ ọrụ na Niantic, ọmụmụ ihe wetara anyị egwuregwu vidiyo ọzọ dị elu akpọrọ Ingress na nke ahụ jikwa eziokwu dịwanye elu nye ụdị ahụmịhe ntụrụndụ ọzọ.
Na ngosi nke Nintendo na ngosi E3, a mara ọkwa na Pokémon GO ga-abụ dị na ekwentị oge ụfọdụ na July. Na nnukwu ihe ijuanya bụ na Nintendo ga ẹkedori Pokémon Go Plus, a wearable gadget na ụdị nke a Bluetooth ọrụ mgbaaka nke ga-ekwe ka egwuregwu na-enweta alerts ma ọ bụ ọbụna "ichu nta" Pokémon na-enweghị na-na-ha igwe. Na ngwụcha July, akụrụngwa a ga - adị nke ga - ere dị ka donuts.
Este wearable gadget Ọ ga-apụta na ndị Fans Pokémon ahụ ga-enwe nhọrọ iji yikwasị ya oge niile ka ịghara ịhapụ ohere ọ bụla ịchụ nta Pokémon ọhịa ahụ na ha ga-ahụ na-agagharị n'okporo ámá nke obodo ahụ.
Pokémon GO ga-ahụ na ndị egwuregwu niile n'ụwa gaa n'uwa n'ezie ịchọ, ichu nta na ịlụ ọgụ na Pokémon gị, site na ịmegharị usoro egwuregwu na eziokwu dịwanye elu nke dabere na Ingress, egwuregwu izizi nke Niantic wepụtara.
Nintendo ga-eji freemium nlereanya ka gụnyere micropayments nke ụdị ụfọdụ, ọ bụ ezie na a ghaghị ikpughe nke a. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ekwenyeghị na ọ ga-ewe anyị ogologo oge iji mụta nkọwa ndị ọzọ maka mbọ dị nso na ọnwa nke July. Dị ka aka console egwuregwu, egwuregwu ga-larịị ma na-anakọta ike Pokémon ike ịlụ ọgụ na ichu nta na "kpara" kere eke.
Ga-agbanye Gyms ndị Pokémon, ebe dịpụrụ iche maka ebe ahụ, ebe ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-alụ ọgụ na avatar ha were ha. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na a ga-ahapụ ya n'otu oge na gam akporo na iOS, yabụ obere ndidi.
Can pụrụ ịhụ akụkụ nke gameplay site na ntinye a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nintendo na-ekwuwapụta na Pokémon GO ga-adị na July yana na ngwa eji ejiji ga-efu $ 35
Fleksy azụrụla Pinterest